iCloud loogu talagalay Windows, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Wararka IPhone
Tan iyo markii la bilaabay iCloud, adeegga kaydinta daruuraha ee Apple ayaa isbeddelay isagoo ku daray waxqabadyo cusub oo hadda, ka dib markii la bilaabay iOS 10, waxaan mar hore tixgelin karnaa Adeegga kaydinta Apple, adeeg loo adeegsado, oo aan ahayn sidii hore loogu shaqeyn jiray, halkaas oo aan si dhib yar ugu isticmaali karno adeeg ahaan si aan ugu kaydinno dukumiintiyadayada iyo faylashayada.
Isdhexgalka ICloud ee macruufka iyo macOS waa wadar, cad. Laakiin qof walbaa ma leh Mac inaad awood u yeelatid inaad si fiican u maamusho dhammaan macluumaadka iyo fursadaha uu adeeggan Apple na siinayo. Apple way ka warqabtaa tan waana sababta ay sidoo kale u jirto iCloud ee Windows.
1 Ku soo dejiso iCloud Windows
2 U dejiso iCloud Windows
2.1 Muxuu noo fidiyaa iCloud Drive?
2.2 Muxuu Sawiradu na siiyaa?
2.2.1 Maktabadda Sawirka ee ICloud
2.2.2 Sawirradayda oo socda
2.2.3 Ku soo dejiso fiidiyowyada iyo sawirada cusub kombiyuutarkayga
2.2.4 Fiidiyowyo cusub iyo sawirro cusub kumbuyuutarkayga
2.2.5 Sawirrada lagu wadaago iCloud
2.3 Muxuu boostada, xiriirada, kalandarka iyo shaqooyinku na siinayaan?
2.4 Maxay Bookmarks na siisaa?
3 Sida iCloud ee Windows u shaqeeyo
Ku soo dejiso iCloud Windows
Qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa dhammaan xulashooyinka ay bixiyaan barnaamijka 'iCloud' ee loogu talagalay Windows. Haddii aad isticmaasho iTunes, waxay u badan tahay haddii aad haysato qalab Apple ah oo ku saleysan macruufka, waa wax ka badan suurtagalnimada in ku adkaysiga Apple ee soo dejinta iCloud aan horay u sameynay sidaasna horay loogu rakibay kombuyuutarkeena. Haddii, dhanka kale, aan ku cusub nahay barxaddan, si aan u bilowno ku raaxeysiga faa'iidooyinka ay iTunes na siiso, waa inaan gujino xiriiriyaha soo socda soo dejiso iCloud ee Windows.
Markaan soo dejino oo aan rakibno, waa inaan dib u bilownaa nidaamkeenna si barnaamijka Apple uu ugu dhex jiro nidaamka oo uu u shaqeeyo. iCloud wuxuu ku shaqeyn doonaa walxaha bilaabaya marka nidaamku bilaabmo, markaa faa'iidada ugu horeysa ee soo muuqan doonta na weydiin doonaa macluumaadka koontadayada iCloud, halkaas oo aan ka gali doonno Apple ID-gaaga lambarkaaga sirta ah ..
Hoos arjiga waxay na tusi doontaa dhammaan xogta aan la jaanqaadi karno kombuyuutarradeena iyadoo la adeegsanayo Windows, xog si macquul ah horeyba loogu adeegsaday qalab macruufka ah ama Mac. Thanks to codsigan, waxaan kuheli karnaa isla xog isku dubbaridey laba nidaam oo kaladuwan oo kaladuwan, taas oo kadhigaysa qalabkan mid muhiim ah hadaan rabno inaan awoodno inaan marin u helno. wax kasta oo daqiiqad ah si loo helo xogtayada, iyadoon loo eegin nidaamka qalliinka ee aan isticmaaleyno.
Sida aan ku arki karno sawirka kore, Apple wuxuu noo ogolaanayaa inaan isku duubno feylashayada ku jira iCloud Drive; wax kasta oo la xiriira Fotos in aan ku sameyno aaladda moobilkeena (iCloud Photo Library, Sawirradayda oo socda, Sawirro lagu wadaago iCloud, iyo sidoo kale inaan soo dejisan karno oo aan ku soo dejin karno fiidiyowyo cusub iyo sawirro kumbuyuutarkeenna); ah emayllada, xiriirada, jadwalka taariikhda iyo shaqooyinka leh Muuqaallada Muuqaalka iyo Safari leh Internet Explorer.
Laakiin marka lagu daro, sidoo kale waan awoodnaa maareeyaan qaybinta kaydinta ee booskeenna iCloud, oo noo oggolaaneysa inaan tirtirno feylasha ama nuqulada nuqul ee ka faa'iideysanaya booska aan qandaraaska ku qaadnay.
U dejiso iCloud Windows
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u qorno xogta koontadayada 'iCloud', sida aan kor uga soo faallooday, codsigu wuxuu na siiyaa dhammaan xulashooyinka aan haysanno si aan awood ugu yeelano inaan ula jaanqaadno kombuyuutarkayaga. Afarta ikhtiyaar ee ay na siiso waxay u muuqan doonaan kuwo calaamadeysan si ay ugu awoodaan inay ugu wareejiyaan talaabada xigta. Haddii aynaan doonaynin inaan ku raaxaysano faylasha iCloud, Sawirro, Bookmark ama mail, xiriiro iyo kuwa kale, waa inaan iska baari karnaa tabka u dhigma. Kiiskan, waxaan ka tagaynaa dhamaan xulashooyinka la hubiyay inaad awood u yeelatid inaad si faahfaahsan u sharraxdo maxay yihiin ikhtiyaarrada ay bixiso ikhtiyaar kasta.
Muxuu noo fidiyaa iCloud Drive?
Sidaan kor ku soo xusay, in mudo ah hada iCloud wuxuu noqday adeeg kaydinta oo caadi ah, inkasta oo ay wali leedahay xaddidaadkeeda. Haddii aan doorano tabkaan, waxaan awoodi doonnaa inaan ka helno dhammaan dukumiintiyada (oo ay ku sifeysan yihiin fayl) Windows-ka PC-ga, sida aan hadda uga qaban karno Mac-da.
Muxuu Sawiradu na siiyaa?
Maktabadda Sawirka ee ICloud
Dhaqaajinta doorashadan waxay noo oggolaaneysaa inaan helno dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada dhammaan aaladaha ku xiran isla aqoonsiga Apple.
Sawirradayda oo socda
Waad ku mahadsantahay sawirradayda socda, waxaan heli karnaa sawirradii ugu dambeeyay ee ay qaadeen dhammaan aaladaha la xiriira isla koontada.
Ku soo dejiso fiidiyowyada iyo sawirada cusub kombiyuutarkayga
Doorashadan ayaa noo oggolaaneysa inaan si otomaatig ah u soo dejisanno, mar kasta oo aan shidno kumbuyuutarka, sawirradii ugu dambeeyay iyo fiidiyowyadii laga helay dhammaan aaladaha la xiriira Aqoonsigeenna Apple.
Fiidiyowyo cusub iyo sawirro cusub kumbuyuutarkayga
Shaqadan, waxaan ugu shubi karnaa koontadayada iCloud dhammaan sawirada iyo fiidiyowyada aan ku kaydineyno tusaha Sawirada \_ Sawirrada kujira iCloud \_ Uploads, diiwaanka nasiib wanaag aan u beddeli karno midka nagu habboon.
Sawirrada lagu wadaago iCloud
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa dhamaan sawirada aan la wadaagnay dad kale Windows PC-ga. Saddexda ikhtiyaar ee ugu dambeeya, waxaan u badali karnaa galka ama soo dejinta buugga midka ugu habboon habka aan ula shaqeyno faylasha.
Muxuu boostada, xiriirada, kalandarka iyo shaqooyinku na siinayaan?
Thanks to Outlook iyo iCloud, waxaan ku raaxeysan karnaa dhammaan xiriirada, jadwalka taariikhda, howlaha iyo emayllada tooska ah ee kumbuyuutarka Windows, sidaa darteed haddii aan ku darno ama tirtirno xiriir ka socda Muuqaalka Windows si otomaatig ah ayaa loogu dari doonaa ama looga saari doonaa qalabkeena gacanta. Isla sidaas ayaa loo sameeyaa emayllada, kalandarrada, iyo shaqooyinka.
Maxay Bookmarks na siisaa?
Browser-ka Apple Safari, oo ku jira noocyadiisa Windows-ka, waa mid ka mid ah daalacashada ugu xun ee aan adeegsan karno. Apple waxay umuuqataa inay ka warqabto tan iyo iyada oo loo marayo iCloud waxaan isku waafajin karnaa calaamadaha bogga internetka oo keliya.
Markaan dooranay dhammaan xulashooyinka aan dooneyno inaan is waafajino, dhagsii Codsiga. Marka ugu horeysa, daaqad ayaa naloo muujin doonaa taas oo ay noo sheegi doonto inay usii socon doonto milmaan calaamadaha iCloud kuwa hadda ku jira Internet Explorer. Guji guji, maadaama xulashada kale tahay Tirtir.
Hadda waa marki ay ahayd Mail, xiriirada, kalandarka iyo hawlaha. iCloud loogu talagalay Windows wuxuu bilaabi doonaa soo dejinta xiriirada, kalandarka, howlaha iyo dhammaan e-mayllada xisaabaadkaan si toos ah loogu dhex daro iyaga Muuqaalka. Marka hawshu dhammaato, daaqad xaqiijin ah ayaa soo muuqan doonta taas oo aan u baahan doonno inaan gujino OK.
Sida iCloud ee Windows u shaqeeyo
Marka hawshu dhammaato, waa inaan tagnaa dhammaan xulashooyinka aan wax ka qabannay si aan u hubino in si sax ah loo qabtay. Si aad u awoodo inaad gasho feylasha ku kaydsan iCloud iyo sidoo kale dhamaan Sawirada la iswaafajiyay ama sidaas yeeli doono mustaqbalka, sida dukumiintiyada kujira iCloud Drive, waa inaan Waxaan tagnaa Helitaanka Degdegga ah halkaas oo ay ku yaalliin laba fayl oo cusub oo la yiraahdo iCloud Drive iyo Sawirro ku yaal iCloud.
Wixii Cxogta heck oo lagu soo koobay Muuqaalka Waa inaan fureynaa arjiga oo aan aadnaa safka bidix si aan u hubino, mid mid, sida xiriirada loo wada shaqeynayay (oo laga heli karo kooxda iCloud Contacts), jadwalka taariikhda (oo lagu soo bandhigi doono isla tirada aan ku leenahay qalabkeena) ), sida dhammaan howlaha aan ku wada shaqeynay iCloud.
Si aad u aragto kuwa ugu cadcad Safari ee la waafajiyay Internet Explorer, waa inaan furno biraawsarka oo aan tagno kuwa ugu cadcad In kastoo Internet Explorer maahan hada biraawsarka asalka ah ee Windows 10 Wixii Microsoft Edge ah, Apple wuxuu sii wadaa inuu calaamadaha calaamadaha ku soo dajiyo biraawsarka halyeeyga ah.
Nasiib wanaag, ka Microsoft Edge waxaan si dhakhso leh uga soo dejin karnaa calaamadaha, oo ah geedi socod aan ku qasbanaaneyno inaan marwalba u qabano si aan u ilaalino astaamaha aaladaha Windows-ka marwalba. Nasiib wanaagse, sameynta kaliya waxay qaadataa laba qasab, marka ma noqoneyso geedi socod waqti-qaadanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » iCloud ee Windows, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waxaan isku dayay inaan u adeegsado wakiillada shirkadayda waana wax aan macquul aheyn in la qaabeeyo ,,, wax fikrado ah?
Hagaag, waxaan iskudayey bilo waqti ka waqti si aan uguwareejiyo iCloudka Windows 10 waana wax aan macquul aheyn. Waxaad ku sii jirtaa daaqadda "geli lambarka xaqiijinta". Si kasta oo aan u dhigo, ma dhacdo. Ma keligay baa tani ku dhacdaa?
Goorma ayey ku weydiineysaa lambarka xaqiijinta? Haddii ay ku weydiiso, waa sababta oo ah waxaad haysataa laba qaybood oo aqoonsi shaqeynaya oo markaad qalab cusub ku xirto koontadaada, kiiskan iCloud ee Windows, waxay farriin u diri doontaa aaladaha aad la xiriirtay si aad adigu geli karaa.
Xaq, waana taas waxa aan sameeyo. Waxaan galiyaa koodhka igu soo gaadha qalab kale oo aan leeyahay "ku shubista" Windows-ku waa mid aan xad lahayn.
Micno malahan haddii PC-gu leeyahay xiriir internet. Mar dambe ayaan isku dayi doonaa. Sikastaba. Uninstall iCloud oo dib u rakib si aad u aragto sida ay u shaqeyso.
Weli waxaan haystaa dhibaatadii oo kale. Waxaan isku dayay ikhtiyaarro badan natiijaduna had iyo jeer waa isku mid. Wixii aan hadda sameeyay waxay ahayd inaan ka baabi'iyo iCloud, dib u soo dejisto mar labaad, rakib (iCloud 6.2.1.67), dib u bilow, qaabee… iyo rar aan dhammaad lahayn.
Waa qalad aan haysto tan iyo markii aan u rogay Windows 10 oo aan is casilay bilo. iPhone, iPad iyo MacBook Pro dhibaato la'aan, laakiin Windows PC-ga aan macquul ahayn.
Waxaan hayaa 2.000 oo sawir oo kaydiyey, qalad ayaan u siiyey inay soo dejiso dhowr jeer haddana waxay soo dejinayaan ku dhowaad 6.000 oo sawir, sidaan u joojiyo soo dejinta) Horeba waan u xiray kalfadhigii, waan bedelay qaabeynta laakiin xilligan aan dhaqaajinayo, way sii socotaa la soo degsashada.
Markii aan soo galo qaybta xulashada sawirka, kaliya waxaan haystaa Sawirro ku jira iCloud iyo albumyo la wadaago, sidaa darteed waxaan u maqanahay dhammaan xulashooyinka kale.
Wax ma ka fikiri kartaa?
Subax wanaagsan Adrian, adigoo gujinaya sanduuqa "Sawirada ku jira iCloud" wuxuu awood u siinayaa xulashooyinka kale. Salaan !!!
Subax wanaagsan, oo leh iCloud waxyaabaha soo socda ayaa igu dhacaya.
Fikradaydu waa inaan la wadaago faylasha inta udhaxeysa 2 xisaabaadka iCloud (oo leh aaladaha Apple iyo Windows) si aad ugu maamuli karto qalab kasta.
Dhibaatadu waxay tahay inaan si fiican u wadaagi karo oo aan u tafatiri karo faylasha la wadaago ee u dhexeeya aaladaha Apple laakiin tani ma aha kiiska iCloud ee Windows Fayllada iyo feylasha laga soo saaray mid ka mid ah xisaabaadka iCloud ayaa ka muuqan kara qalabkeyga isla isla xisaabta (Windows iyo Mac) laakiin marka la wadaago, kaliya waxaa lagu arkaa aaladaha Apple. Ma arki karo faylasha ay wadaagaan xisaab kale oo iCloud ah oo ku saabsan qalabka Windows. Salaan ka dib waxaan rajeynayaa xallinta dhibaatada wararka soo socda. Dhanka kale, waan arki doonaa haddii ay ka caawineyso bixinta adeegga iCloud ama u haajirto adeeg daruur kale oo i siin kara adeegga buuxa.
Tufaax ayaa xamuul ah
Qaybta IOS ee Shiinaha waxay na siisaa xogtii ugu xumeyd seddexdii sano ee la soo dhaafay